के कपडा धुन जरुरी छ ? कि झट्कारे मात्र पुग्छ ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
के उनले भनेजस्तै गरेर कपडा सफा हुन्छ त ? धेरैले यो प्रश्न गरेका छन् ।
साथै ब्रामा लगाइएको तार पनि निस्किन सक्दछ । ब्राको रङ पनि फिक्का हुनसक्छ र ब्राको कपको आकार पनि बिगि्रन्छ सक्दछ ।’
प्रोफेसर ग्रोव्स बर्गको त्यो कुरासँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले चिनेकामध्ये धेरै मानिसहरु आफ्नो जिन्स कहिल्यै पनि धुँदैनन् । यो अनौठो लाग्न सक्दछ । हुनत जिन्स सजिलैसँग हरेक दिन धुन सकिन्छ । तर मानिसहरु जिन्सको रङ नबिगि्रयोस् भनेर त्यसलाई धुँदैनन् ।’